Maninona ianao no tokony hanatsara ny Google Universal Analytics | Martech Zone
Maninona ianao no tokony hanatsara ny Google Universal Analytics
Alarobia, Oktobra 15, 2014 Alahady Oktobra 19, 2014 Tim Flint
Andao esorintsika tsy ho diso io fanontaniana io izao. Tokony hanavao ny Universal Analytics vaovao an'ny Google? Eny. Raha ny marina, azo inoana fa efa novaina ho Universal Analytics ianao. Saingy, fotsiny satria nanavao ny kaontinao ho anao i Google, tsy midika izany hoe tsy mila manao zavatra hafa ianao na manararaotra tsara ny kaontinao Universal Analytics vaovao.
Izao dia izao, Google Universal Analytics dia ao amin'ny dingana fahatelo ny rollout. Tsy ao anaty beta izany ary havaozina ho azy ny ankamaroan'ny kaonty. Raha ny marina dia tsy afaka misafidy ilay kinova taloha an'ny Analytics rehefa manangana kaonty vaovao intsony. Raha vao nivoaka tamin'ny beta ny Universal Analytics, dia mbola tsy nahitana endri-javatra manan-danja ho an'ny orinasa maro. Izany dia fampisehoana fampisehoana doka izay mamela anao hamorona lisitra retargeting. Ankehitriny, ny fampisehoana fampisehoana dia tafiditra tanteraka ao amin'ny Universal Analytics (UA), midika izany fa tsy misy na inona na inona hitazona kaonty vaovao tsy hiaraka amin'i UA. Na izany aza, tsy midika izany fa satria nohatsaraina ny kaontinao dia mbola tsy misy zavatra tokony hotandremana rehefa manavao.
Zavatra tokony hotandremana
Amin'izao fotoana izao, raha mampiasa ga.js, urchin.js, na ireo kinova WAP an'ilay kaody ao amin'ny tranokalanao, dia mila manavao ilay kaody ianao rehefa tonga i Google dingana fahaefatra amin'ny fanavaozana ny Universal Analytics. Tao anatin'ny roa taona nanombohana ny dingana fahefatra dia tsy hanana intsony ireo kinova ireo kaody. Ary, tsy ny script fotsiny no ho lany andro. Raha manana fari-pahaizana manokana na miovaova voafaritra ampiasain'ny mpampiasa ampiasainao ianao hanarahana ny angona, dia tsy maintsy avadinao ho refy namboarina izy io mba hahafahanao mampiasa azy ireo, satria tsy ho lany andro intsony koa izy ireo.
Midika koa izany fa amin'ny ho avy, raha mampiasa ny fomba taloha fanaovana fanarahana hetsika ianao dia tsy maintsy havaozina ihany koa amin'ny kinova vaovao amin'ny kaody fanarahana hetsika. Ka raha tsy mbola havaozina ny kaodinao, maninona no izao ianao no mandalo ny olana rehetra fa tsy miandry roa taona?
Fa maninona no vita ny fanavaozana?
Ny antony nanatsarana ny Google dia tsy hoe handany fotoana fotsiny fotsiny. Navoakan'izy ireo ny endri-javatra sasany izay, raha manokana fotoana hampiharana azy ireo ianao, dia hahafahanao mandrefy ireo zavatra izay tsy fantatrao akory taloha. Ny sehatra vaovao dia hamela anao:
Angony angona avy amin'ny zavatra rehetra
Mamorona refy namboarina sy refy ampiharina
Ampiasao ny ecommerce manatsara
Google dia manana fomba telo hanangonana angona: analytics.js ho an'ny tranonkala, SDK finday ho an'ny iOS sy Android, ary - amiko ny tena mahaliana indrindra - ny refy fandrefesana ho an'ireo fitaovana nomerika. Azonao atao izao ny manara-maso ny tranokalanao, ny fampiharana anao ary ny masinina kafe anao raha tianao izany, ao anatin'ny Google Analytics. Efa apetraky ny olona ny fiasa momba ny fandrefesana mba hahafahan'izy ireo manisa ny fifamoivoizana an-tongotra, manara-maso ny mari-pana, sns. Tena tsy misy farany ny azo atao, indrindra noho ny fisehoana vaovao manaraka.
Refy namboarina sy refy fatra
Ny refy namboarina sy ny metrika manokana dia ny kinova voaangona amin'ireo fomban-drazana taloha. Mba hanomezana anao hevitra ny mety ho herin'ireny refy vaovao ireny dia ndao lazaina hoe rehefa misoratra anarana amin'ny serivisinao ny olona iray izay toa serivisy mitovy amin'ny Yelp dia manontany azy ireo andiana fanontaniana maromaro ianao. Azonao atao ny manontany azy ireo fanontaniana izay manana refy namboarina izay antsoinao karazana trano fisakafoanana ankafizina. Ny valin'ireto fanontaniana ireto dia mety ho sakafo Meksikana, fivarotana sandwich sns. Mety hametraka fanontaniana manaraka ianao avy eo hoe impiry isam-bolana izy ireo no misakafo any ivelany. Ity dia manome anao metrika fanao vaovao vola mihinana isam-bolana na AEOM. Azonao atao izao ny mijery ny angon-drakitrao mba hanasarahana ireo mpampiasa samihafa hahitana ny fomba fampiasan'izy ireo ny tranokalanao. Ohatra, azonao atao ny mampizara olona izay tia fivarotana sandwich izay misakafo im-5 isan-kerinandro. Ity dia mety hanampy anao hahafantatra ny fomba hahatratrarana votoaty tsara kokoa amin'ny tranokalanao. Tsy manam-petra ny fahafaha-manao, indrindra rehefa manampy an'io amin'ny findainao. Raha nampiditra an'ity fanarahan-dia ity tamin'ny lalao finday ianao, dia ho hitanao ny fomba rehetra filalaovan'ny mpanjifa ny lalao.
Satria mpanjifa maro kokoa no mampiasa fampiharana finday ary mifanakalo eo anelanelan'ny telefaona, takelaka ary fitaovana hafa ny mpanjifa, dia tsy ho fantatrao mihitsy hoe firy ireo mpampiasa miavaka sy miasa anao isam-bolana amin'ny nentim-paharazana Analytics. Ankehitriny amin'ny famoronana ID fanao natokana ho an'ireo mpampiasa anao dia azonao atao ny manara-maso ny mpampiasa mampiasa ny telefaona findainy, ny takelaka ary ny solosaina findainy mba hidirany amin'ny tranokalanao ho mpampiasa iray. Manome anao fahitana bebe kokoa noho ny teo amin'ny fomba ampiasain'ny mpanjifanao ny serivisinao izany. Midika izany fa tsy misy mpampiasa fanisana indroa na telo intsony. Vao nahadio kokoa ny angon-drakitrao.
Miaraka amin'ny tatitra momba ny ecommerce nohatsaraina, aza jerena fotsiny hoe inona no novidian'ny mpampiasa teo amin'ny tranokalanao sy ohatrinona ny vola nalainy. Fantaro ny fomba niafarany tamin'ny fividianana. Hahazo tatitra toa ny zavatra ampidirin'ny mpanjifa amin'ny kalesiny sy ny zavatra esoriny amin'ny sari-taniny. Ho fantatrao aza hoe rahoviana izy ireo no manomboka ny fisavana ary rehefa mahazo famerenam-bola. Raha zava-dehibe amin'ny tranokalanao ny ecommerce dia jerena lalindalina kokoa izany Eto satria misy zavatra betsaka azo jerena.
Ity misy video misy ny fomba PriceGrabber dia mampiasa Google Universal Analytics:
Inona no andrasanao? Araraoty ny angon-drakitra vaovao azonao idirana mba hahafahanao manome ny mpanjifanao traikefa tsara kokoa amin'ny fitaovana rehetra.
Tags: Google Analyticsgoogle analytics rehetrapricegrabberanalytics manerantanyhavaozy ny google analyticshavaozy ny google analyticsfanavaozana ho an'izao rehetra izao analyticsinona ny analytics rehetramaninona no havaozina ho amin'ny analytics ankapobeny
Tim Flint no filohan'ny Flint Analytics, sampan-draharaha nomerika mifantoka amin'ny haino aman-jery karama an-tserasera, analytics an-tranonkala ary ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po ho an'ireo orinasa lehibe na kely. Izy koa no mpanorina ny Smartups Indy, vondrona fihaonana isam-bolana izay mampianatra ireo mpanorina sy mpivarotra manomboka ny fomba hampitomboana bebe kokoa ny orinasany.
Tokony hanangana na hividy ny sehatra fivarotana manaraka ve ianao?